China FOTON U12 fekitori uye vagadziri | Foton
FOTON U12 yegoridhe powertrain inosimbisa yakanakisa simba mashandiro uye kuderera kwekushandisa, kuzadzisa zvido zvako zveapo neapo sevhisi uye wenguva dzose sevhisi kumatunhu marefu.
Kunopindirana Dimension 1200 * 2550 * 3790
Kurambidza Kurema 14.5T
Kugara Kugona 32 + 1 + 1/47 + 1 + 1 (chimbuzi) / 49 + 1
Chimiro chemuviri Semi-monocoque
Luagge Chikamu 10 m3
FOTON U12 Yega Windshield kochi inoratidzira dhizaini uye yakagadziridzwa mwenje, ichivaka yakasununguka uye inonakidza nharaunda yevanofamba.
Goridhe powertrain Inosanganisa neCummins ISG injini, ZF kufambisa, SACHS batira uye WABCO ABS uye ESC (inosarudzika), ichijekesa kuita kwakanyanya uye kuderera kubuda.
Inotungamira isina huremu uye modular dhizaini;
2000bar yepamusoro-yekumanikidza jet tekinoroji;
Kupayona maitiro matsva uye zvigadzirwa.
Chiedza-huremu, aruminiyamu dzimba;
Ruzha ruzha kuburitswa kuburikidza yakagadziriswa helical magiya;
Kugadziriswa-kwemahara ma synchronizers pane izere yekufambisa hupenyu;
Hupenyu hwese hwemafuta kuzadza hunowanikwa.
Inobatsira kuwedzera hupenyu hwematairi kusvika pa10%;
Inogonesa kudzora kwetrailer panguva yekukurumidzira kufamba;
Inobatsira kudzivirira tirera kutsvedza uye jackknifing panguva yekumira.
Inowedzera kushanda kwemabhureki pane ese
Yakakwira yenguva dzose coefficient yekukwesana;
Smooth kubatanidzwa kuita;
Kupisa kwakanyanya kupisa (kupera);
Yakaderera kupfeka mwero & Yakakwira kumhanya kugadzikana;
Hapana deformation tenderera;
Zvakatipoteredza inoenderana mukugadzira uye
Injini yemakamuri ine tembiricha yekuyera yeiyo chaiyo-nguva yekutarisa uye yekuzvidzimisa yega mudziyo kuona chaiyo-nguva yekutarisa; murazvo-unodzivirira zvinhu uye A-giredhi murazvo-unodzivirira zvinhu zvine zvirinani chengetedzo mashandiro anoshandiswa akatenderedza inotonhora sosi.
Foton muridzi weNational standard-level mitsara ye digitization, yekumhanyisa bvunzo rig, sidelip bvunzo-mubhedha, ekisero mutoro, ABS bvunzo-mubhedha, akamedura bvunzo kuongorora system uye vamwe, Kuchengetedza chitupa uye kubvumidzwa kubva kuGerman TUV Rheinland neCNAS yenyika murabhoritari
Zvigadzirwa zveFoton zvinopinda mukuomarara kwekuonekwa kwemota uye rollover bvunzo pamusoro pezviuru zana zvemakiromita mune mamiriro emhando dzakasiyana dzemigwagwa uye pasi pemamiriro ekunze akaipisisa senge tembiricha yakakwira, tembiricha yakadzika uye kumanikidza kwakaderera.
Foton Yakashongedzerwa nehunyanzvi bhenji mabhenji uye akasiyana-siyana bvunzo maturu kuvimbisa kuvimbika uye kugona kwemidziyo uye masisitimu ayo Bhabhoni rebhokisi rakaiswa. Iine chimiro chakaomarara uye chakasimba, bhazi reFoton rinomira padivi-ne uye musoro-pazvibodzwa pamwe nekudzivirira kukwirisa kwepamberi. Vasati vapinda mubasa, vanoedzwa zvakanyanya uye kuongororwa.